Qeybta 1: windows media player surin-in u Firefox
Qeybta 2: windows media player surin-in u chrome
Qeybta 3: 8 More fur-in u windows media player
Bareesada-tago in la hubiyo in faylka browser ku salaysan aan loo soo ciyaaray oo kaliya laakiin user sidoo kale helo natiijada ugu fiican ee arrintan la xiriira marka ay timaado faylasha windows media player ku salaysan oo loo kordhin. Tutorial Tani waxay hubin doonaan in ay sida ugu fiican oo gobolka ka mid ah geedi socodka ka mid tahay duuban ee WMP surin-tago laba daalacashada weyn sida Chrome iyo Firefox aanay kaliya laakiin kan kale fur-tago muhiim ah in user a waa in ay sidoo kale ka wada hadlay si faahfaahsan . Sharaxaadaha waxay hubiyaan in user marnaba wajahaya arrin kasta oo arrintan la xiriira.
1. page interoperatibility waa in laga heli sida ay tahay talo rasmiga ah ee Mozilla iyo Download hadda button waa in la sii adkeeyey. URL waa http://www.interoperabilitybridges.com/windows-media-player-firefox-plugin-download
2. file waa in la badbaadiyey sida ay keentay in:
3. file waa in la badbaadiyey in desktop iyo waa in la double riixi inay dhidibbada u aasto fur-in. Marka la sameeyo waa in Firefox la gabi ahaanba la xidhay:
4. In bar cinwaanka user u baahan yahay inuu ku qor qoraal ku saabsan: config si shaashadda soo socda u muuqataa meesha user ay u baahan tahay in ay doortaan "Waxaan tagi doonaa si taxaddar leh Waxaan balanqaadayaa".
5. Bogga xiga user ka raadin waa plugins.load_appdir_plugins oo waa dhigay qiimaha si run ah, haddii ay tahay been ah,
6. browser ayaa la sheegay in laga shaqeynayo si loo hubiyo in ay ka siib-in lagu rakibay ayaa karti iyo tan ayaa sidoo kale dhameystiray habka buuxda.
Tani waxay ka siib-in uu ahaa user doorashada ugu fiican iyo marka ay timaado Chrome ka dibna ay taageerayaan xoogga Google browser waxa sidoo kale loo isticmaalaa in la hubiyo in user ku helo waayo-aragnimo fiican ee la daawado iyo markii la socotid this fur-in markaas browser sii xoog badan. Tani waxay qayb ka mid ah tutorial inay hubiyaan in sida user a soo bixi kartaa this cajiib ah ka siib-in u Chrome si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican ka dhigi doonaa. Waxaa sidoo kale in la xuso in chrome uusan haysan wax ka siib-in gaar ah WMP ah oo sidaas daraaddeed sida kale Video il u Google Chromecast loo isticmaali doono.
1. user wuxuu u baahan yahay in ay soo booqdaan dukaanka Web Chrome dhex URL: http://www.google.com/chrome/intl/en/welcome.html
2. user ayaa markaas u baahan yahay inuu ku qor weedh daaqadaha ciyaaryahanka warbaahinta gudahood bar raadinta:
3. Tallaabada ugu danbeysay ee raadinta hore natiijo ie Video Stream u Google Chromecast waa in lagu daro in sidoo kale taageertaa WMP iyo u dhaqmo sida ay kordhin sidoo. The add si Chrome button waa in la weeraray in ay dhamayso:
4. browser ayaa la sheegay in laga shaqeynayo si loo hubiyo in hannaanka uu dhammaanayo buuxa:
Ka dib waxaa liiska waa in ay leeyihiin fur-in ciyaaryahanka Windows Media:
1. Hurdada Saacad (freeware)
Waa mid ka mid ah fur-in ugu fiican taas oo ka dhigaysa hubiyo in computer uu aado isla seexan sida playlist la soo gabagabeeyay. Waxa kale oo ka siib-in ugu fiican in la hubiyo in user marnaba wajahaya arimaha xoog leh batteriga sida ay sidoo kale recycles oo sifeeyo nidaamka maamulka awood.
2. Lyrics koronto-in (freeware)
Sida magacaba ka muuqata tan fur-in hubiyaa in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay marka ay timaado lyrics ka raadin internet-ka. Tani waxay ka siib-in la shaqeeyaa marka kombiyuutarka xiran internetka iyo si toos ah u sameeya raadinta user:
3. Pixel qeybo (freeware)
Marka ay timaado in ay tashwiish videos waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka oo ka mid ah farshaxanka fur-in si loo hubiyo in tayada la soo celiyo si ay ugu fiican oo user sidoo kale helo natiijada in uu yahay gobolka of farshaxanka arrintan la xiriira. Kasta video bixi internet ka dooran karo ee arrintan la xiriira.
4. Hadda ciyaaro (freeware)
Waa fur-in taas oo ka dhigaysa hubiyo in user helo natiijada ugu fiican marka ay timaado ku daray content in ay warbaahinta bulshada. Tani waxay ka siib-in u ogolaataa user ay u wadaagaan heeso ama filimada saaxiibbadayda la isla dhex Twitter iyo Facebook oo kale ah waa labada ugu sareeya adeegyada warbaahinta bulshada oo caan ah.
5. MGTEK dopisp ($ 19.95, 30 maalmood maxkamad free)
Tani waxay sidoo kale waa mid ka mid ah ugu wanaagsan ee fur-tago oo la hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada tahay markii u hagaagsan waxaa loo baahan yahay inta u dhaxaysa iDevice iyo media player. Shaqada ee this fur-in uu yahay dhakhso ah oo waxtar leh oo sidaas daraaddeed waa dooqa koowaad ee user sida bixinta $19.95 yahay kaliya hal mar.
6. furayaasha WMP surin-in (freeware)
Sidoo kale waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka fur-in tahay in user a rakibi karo si loo hubiyo in furayaasha toobiye ah waxaa lagu qeexaa sida ay tahay doonista iyo rabitaanka dadka isticmaala ee. The functionalities gundhig sidoo kale si loo hubiyo in user ka bedesho waqti kasta furayaasha uu doonayo.
7. DFX enhancer audio (freeware)
Waxaa fur-in a ka dhigaya user a dareemayaa dhagaysto cabsi badan cod ciyaaryahan warbaahinta in uu ka maqnaa muddo sanado ah. Shaqeynta ugu fiican waa in ay fur-in disables dhawaaqyada asalka si loo kordhiyo tayada ee user. Tani waxay ka siib-in uu ahaa mid aad u guulaystay sidii loo baaro on XP, Windows Vista, Windows 7 iyo Windows 8.
8. Google hadli koronto-in (freeware)
Waxaa kale oo farsamo ugu fiican si loo hubiyo in content la ciyaari Windows Media ciyaaryahan lagu muujiyay on Google Talk. Ka dib markii la rakibey fur-in loo arki karaa iyagoo hoos yaala qaybta soo jeeda oo ka mid ah ciyaaryahankii Windows Media oo waxaa wax loo baahan yahay si ay u gudato sida loo sameeyo by default.
> Resource > WMP > 10 fur-tago for windows media player aad u leeyihiin in ay ogaadaan